संग्रह वकील चाहिन्छ? सम्पर्क Law & More
नेदरल्याण्डमा tण स in्कलन र सम्पत्ति संलग्नक
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि नेदरल्याण्ड्समा bank०% दिवालियापनहरू भुक्तान नभएको इनभ्वाइसहरूको कारणले भएको हो। के तपाईंको कम्पनीमा ग्राहक छ जसले अझै भुक्तान गरेन? वा तपाइँ एक निजी व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाइँसँग debणी छ जो अझै तपाइँको moneyणी छ? त्यसपछि सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More collectionण स lawyers्कलन वकीलहरू।
आउटस्यान्डि IN इनभ्वाइकहरू संकलन गर्नुहुन्छ?
Collectionण संग्रह कानून
> Collectionण स collection्कलन एजेन्सीको दृष्टिकोण
> संग्रह प्रक्रियाको चरणहरू
• aण संकलन वकील मात्र € 25.000,00 भन्दा माथि दाबी को लागी कानूनी कार्यवाही गर्न अधिकृत छ।
The सम्पत्ति र एक torणीको आय कब्जा गर्न अधिकृत
A एक collectionण स collection्कलन वकील मात्र बैंकरप्शन याचिका दायर गर्न अधिकृत छ।
International aण संकलनका वकिलहरू मात्र अन्तर्राष्ट्रिय debtण संकलन मामिलाहरू सम्हाल्न अधिकृत छन्।
Legal कानूनी विवाद समाधान गर्न योग्य। एक debtण स collection्कलन वकील अनुकूलित समाधान प्रदान गर्न र मुल्या .्कन गर्न र बचाव फिर्ता लिन अधिक उपयुक्त छ।
यो अक्सर हुन्छ कि स process्ग्रह प्रक्रियाको समयमा, यो अझै पनि संग्रह एजेन्सी वा बेलीफबाट एक संग्रह वकीलमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा यो सजिलो र अधिक संगठित हुनको लागि एकैमा र सोझै फर्मको सिधा, जहाँ तपाईं पहिले नै ज्ञात हुनुहुन्छ र फाइल पहिले नै तपाईंको लागि निर्माण गरिएको छ।
संग्रहको चार चरणहरू सही
सम्पर्क Law & More
के तपाइँ एक गैर-भुक्तानी ग्राहकसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ? सम्पर्क Law & More
हामी theणीलाई डिफल्टको सूचना मार्फत भुक्तान गर्न अनुरोध गर्दछौं
हामी torणीलाई भुक्तानी गर्न वा भुक्तानीको व्यवस्था गर्न वार्ताको व्यवस्था गर्छौं
हामी एक कानूनी कार्यवाही शुरू गर्छौं र आवश्यक छ भने सम्पत्ति कब्जा गर्दछौं
सहमत समय भित्र। ”
Collectionण स collection्कलन एजेन्सीको दृष्टिकोण
प्रत्येक संग्रह प्रक्रियाको लागि, धेरै चरणहरू लिनुपर्दछ। पहिलो चरण भनेको torणीलाई सूचित गर्नु हो कि उसले आफ्नो भुक्तानी दायित्व पूरा गरिरहेको छैन। यो किनभने तपाईंले उसलाई कुनै अधिक लागत बिना उचित अवधिमा भुक्तान गर्ने अवसर दिनुपर्दछ। तपाईंले effectणीलाई यस प्रभावको लागि लिखित अनुस्मारक पठाउनु पर्छ। यस अनुस्मारकलाई पूर्वनिर्धारित सूचना भनिएको छ। चौध दिनको अवधि सामान्यतया एक उचित अवधि मानिन्छ जहाँ .णदाताले दावी तिर्न अनुरोध गर्दछ। अवश्य पनि, Law & Moreवकिलहरु को लागी तपाइँ को लागी डिफ़ॉल्ट को लागी एक सूचना को लागी लिन सक्नुहुन्छ
यदि पूर्वनिर्धारित को कुनै सूचना पठाइएको छैन भने न्यायाधीशले क्षतिको लागि कुनै दावी अस्वीकार गर्दछ। यद्यपि त्यहाँ त्यस्ता परिस्थितिहरू छन् जुन पूर्वनिर्धारित सूचना पठाउन आवश्यक पर्दैन, उदाहरणका लागि सम्झौताको पालना स्थायी रूपमा असम्भव छ। जे होस्, सावधानीको रूपमा सँधै पूर्वनिर्धारित सूचना पठाउनुहोस्। यदि भुक्तानीको लागि अनुरोध अनुपालन गरिएको छैन भने, हामी स process्कलन प्रक्रिया सुरू गर्न सक्दछौं।
संग्रह प्रक्रियाको चरणहरू
स process्कलन प्रक्रियामा दुई सम्भावित चरणहरू छन्: मैत्री चरण, जसलाई बाहिरी अदालत पनि भनिन्छ, र न्यायिक चरण ..
यदि पार्टीहरू बीचको सम्बन्ध राम्रो छ भने, पहिले मैत्री चरण मार्फत जानु राम्रो हुन्छ। यस चरणमा, हामी writtenणीलाई लिखित अनुस्मारकहरू र टेलिफोन सम्पर्कको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रयास गर्दछौं। यो सम्भव छ कि यी छलफल र वार्ताले भुक्तानी व्यवस्थामा नेतृत्व गर्नेछ। हामी सिफारिस गर्दछौं कि भुक्तानीको व्यवस्था राखिनेछ। हाम्रो debtण संकलन वकीलहरूले यसको ख्याल राख्न सक्दछन्। एक सुखद चरणको फाइदा भनेको पक्षहरूबीचको सम्बन्धलाई प्रायः बिग्रेको हुँदैन र कानूनी कार्यवाहीको लागि कुनै शुल्क तिर्ने छैन।
यदि दयनीय चरण theणी द्वारा एक भुक्तानी वा भुक्तानी व्यवस्था संग समाप्त गर्न सकिदैन, कानूनी कार्यवाही शुरू गर्न सकिन्छ। मैत्रीपूर्ण स्टेप छोड्न र तुरून्त कानुनी कार्यवाही सुरू गर्न पनि सम्भव छ। कानूनी चरणमा, हामी अदालत समक्ष बकाया रकम र स costs्कलन लागतहरूको भुक्तानी दाबी गर्दछौं। कानूनी कार्यवाही सुरु हुनु अघि, theणीको सम्पत्ति जफत गर्न सम्भव छ। यसलाई कन्जर्वेटरी दौरा भनिन्छ। पूर्वाग्रह संलग्नता अदालतले निर्णय गर्नु अघि toणी सम्पत्ति सार्न असमर्थ छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हो, ताकि तपाईं वास्तवमा costsणदाताबाट तपाईंको लागतहरू पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि न्यायाधीशले तपाइँको दावी तोक्छ भने, एहतियता एट्याचमेन्ट लागूको लागी लगाउन सकिन्छ। यसको मतलब यो छ कि संलग्न सम्पत्तिहरू बेलीफद्वारा सार्वजनिक रूपमा बेच्न सकिन्छ यदि torणीले अझै भुक्तान गरिरहेको छैन। यी सम्पत्तिहरूको आम्दानी तपाईंको दावी भुक्तान गर्न प्रयोग हुनेछ। Law & Moreगरेको collectionण स lawyers्कलन वकिलहरूले एट्याचमेन्ट कानूनको क्षेत्र मा अनुभव छ र कानूनी प्रक्रिया को समयमा तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी छन्।
Law & More पनि भुक्तान र ढिलाइ भुक्तान सम्बन्धित जोखिम रोक्न सहायता प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, हामी ग्राहकहरु लाई तिनीहरुको सामान्य नियम र सर्तहरु भुक्तान सर्तमा सामेल हुन सल्लाह दिन्छौं जुन ढिलाइ भएको खण्डमा अस्पष्टताबाट बच्न सक्छ। के तपाई यस बारे थप जानकारी चाहानुहुन्छ? कृपया debtण स collection्कलन वकीलहरू सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More.